सुशान्तको खातामा कहाँबाट आयो १५ करोड ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तको खातामा कहाँबाट आयो १५ करोड ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको देह त्याग प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रम जारी छ । प्रहरीले सुशान्तको बैंक खातामा १५ करोड कहाँबाट आयो भनेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरी तीनवटै बैंकमा पुगेको छ । भारतको प्रवर्तन निदेशालय र प्रहरीले सुशान्त राजपूतसँग १५ करोड भारतीय रुपैयाँ कहाँबाट आयो भनेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । यस बाहेक, प्रहरीले सुशान्तको पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडेलाई पनि सोधपुछ गरेको छ ।
सुशान्तले २०२० को १४ जुनमा मुम्बईस्थित आफ्नो फ्ल्याटमा फाँसी लगाएर देह त्याग गरेका थिए ।